अन्तराष्ट्रिय Archives - Prateek Nepal
एजेन्सी / अमेरीकाको एक अस्पतालमा २ सय ४५ ग्रामका शिशू जन्मिएका छन् । शिशूको नाम उनका अभिभावकले सेबी राखेका छन् । शिशू जन्मदा उनको तौल एउटा स्याउको तौल बराबरको भएकाले शिशूका बाबुआमाले नाम नै सेबी राखेका हुन् । डिसेम्बर २०१८ मा जन्मिएका उनी २३ हप्ता तीन दिनमा जन्मिएका हुन् । कम तौल भएका कारण चिकित्सकहरुले […]
अमेरिकाकी २२ वर्षकी युवती डिजायर गेटो एक समय रियलस्टेट व्यवसाय गरेर सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । यससँगै उनले साइड बिजनेसको रुपमा मोडलिङ गर्न थालिन् । यस क्रममा उनले मानिसहरुले उनको खुट्टा निकै मन पराउने थाहा पाइन् । उनका खुट्टाको तस्वीरको लागि मानिसहरु ठूलो रकम खर्च गर्न तयार रहेको थाहा पाउँदा उनलाई अचम्म लाग्यो । अहिले […]
कुमाख गाउँपालिका १, भितिवन सल्यान घर भै हाल वैदेशिक रोजगारी को सिलसिलामा Malaysia को Evyap Sabun Sdn.Bhd Company Johor Baru मा नरेश राना बिगत तिन वर्ष अघि निरन्तर duty गर्दै आउनु भएको थियो र आजको मिति 13/01/2021 & २०७७/९/२९ गते को दिन असामयिक निधन हुँदा उहाँ को आत्मा ले शान्ति पावस भन्दै हार्दिक श्र’द्धाञ्जली अर्पण […]
काठमाडौँ / भा’रतलाई ठु’लो झ*ड्का ! सि’मामा थाहै नपाइ चिनले यसरी गाउँ नै बना’इदियो । भा’रतलाई ठु’लो झ*ड्का ! सि’मामा थाहै नपाइ चिनले यसरी गाउँ नै बना’इदियो ।भा’रतलाई ठु’लो झ*ड्का ! सि’मामा थाहै नपाइ चिनले यसरी गाउँ नै बना’इदियो । भा’रतलाई ठु’लो झ*ड्का ! सि’मामा थाहै नपाइ चिनले यसरी गाउँ नै बना’इदियो । त्यसैगरी : […]
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेट नदिएको भनेर भारतको चर्को आलोचना भइराख्दा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग भारतको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपालले जे भनेपनि छिमेकीका साथसाथै नेपाल आफ्नो छोटा भाइ भएको प्रतिक्रिया दिँदै सिंहले नेपालसँग शत्रुताको कुरा कल्पना गर्नै नसक्ने बताउनुभयो । भारतीय टेलिभिजन आजतकमा पत्रकार प्रभु […]
एजेन्सी / भारतको गुजरातमा ट्रक’ले कि’च्दा १५ जना’को मृ’त्यु भएको छ । गुजरातको सुरत भन्ने स्थानको सडक किनारमा सुतिरहेका मजदुरहरुमाथि एक ट्रक अ’नियन्त्रित भइ गुडेको थियो । यो द’र्द’ना’क घ’टनामा १५ जनाको घ’टनास्थल’मै मृ’त्यु भएको र सात जना घाइ’ते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । १३ जनाको घटनास्थल’मै र २ जनाको स्मीमेर अस्पतालमा उपचारको […]
एजेन्सी । बलिउड स्टार अनिल कपुर शारिरीक फिटनेशका लागि निकै चर्चित छन् । ६३ वर्षको उमेरमा पनि उनी निकै फुर्तिला देखिन्छन् । उनको फिटनेश र फुर्ति देखेर बलिउडका अन्य कलाकारहरु प िअचम्म पर्छन । उनी फिट भएर पनि लुगा विनाका तस्बिर खिचाउन भने हिचकिचाउँथे । उनको शरिर भरी रौं भएका कारण उनको यस्तो अवस्था भएको […]
एजेन्सी । रोहनप्रीत सिंह र नेहा कक्करको जोडी फ्यानको मनपर्ने मध्य एक हो । यी दुईको प्रेम कहानी धेरै राम्रो छ र विवाह पछि, ती दुबैको चर्चा बढी भएको छ । बे नेहा कक्कड़लाई रोहनप्रीतले न शा को तालमा विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए । , हास्य अभिनेता कपिल शर्माको कार्यक्रममा नेहा कक्कड़ आफैले यो कुराको […]